30 Krismasy fanomezana hevitra ho an'ny mpahay teknolojia ankizy - News Fitsipika
30 Krismasy fanomezana hevitra ho an'ny mpahay teknolojia ankizy
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “30 Krismasy fanomezana hevitra ho an'ny mpahay teknolojia ankizy” dia nosoratan'i Stuart Dredge, fa theguardian.com ny alakamisy 26 Novambra 2015 07.00 UTC
Fa ny ray aman-dreny mitady ny loka ny zanany hiala amin'ny fiainana an-tserasera, maro ireo azo tsapain-tanana, inventive, fampianarana sy / na ny voly ara-batana vokatra avy tany nandritra ny mpahay teknolojia zanaky ny 2015.
Na ny ray aman-dreny ianao, carer, havana na namana ny fianakaviana - ary na inona na inona ny vidiny isan-karazany - ianao namabo ho an'ny safidy raha ny teknolojia mifandray amin'ny fanomezana tamin'ity taona ity. Ireto ny sasany amin'ireo ohatra tsara indrindra.
Raha toa ny ankizy foana ny miezaka hahazo ny tanany eo amin'ny takelaka, dia mety misy dikany mba hividy azy ireo ny - amin'ny mety fitsipika momba ny tena izy ireo mampiasa izany, mazava ho azy. Amazon ny ankizy-mifantoka tsara takelaka dia mendrika ny fijery. Fa £ 100 anao hahazo ny nippy fitaovana amin'ny chunky rubberised raharaha mba hiarovana azy amin'ny nilatsaka - amin'ny Amazon ny afo ho an'ny Kids Unlimited £ 3.99-a-volana famandrihana bundling fampiharana, boky sy lalao.
• Full famerenana ny afo HD Kids Edition
Coding ny beginners fampiasana Scratch.
2. Coding ny beginners fampiasana Scratch (£ 13)
Usborne dia famoahana ny ankizy ny boky momba ny fandaharana nanomboka tamin'ny faramparan'ireo taona 1970, ary ny farany fanafahana mifanaraka tsara Kendreo ho izany lova. Ny boky dia mifantoka amin'ny Scratch, ny maso fandaharana ny tontolo iainana izay nampiasaina tao amin'ny Mihamaro ny Britanika sekoly mba hampahafantatra ny ankizy ny Coding. Tena ho azon'ny fampidirana, mandeha ny ankizy amin'ny alalan'ny fototra alohan'ny mahazo azy nanomboka tamin'ny tetikasa mahafinaritra sasany mba haninjitra ny fahaiza-manao.
• Interview: Usborne ny Lisa Watts amin'ny fampianarana ny ankizy code
Minecraft Stop-Motion Movie Mpamorona.
3. Minecraft Stop-Motion Movie Mpamorona Animation Studio (£ 30)
Olona an-tapitrisany ny ankizy tia milalao Minecraft, ary koa ny mijery ny lahatsary an-tserasera izay noforonina mampiasa azy io amin'ny YouTubers toy ny Stampy sy The Diamond Minecart. Ity fitaovana avy Mattel mikendry ny hiverina ankizy ho blocky mpilaza tantara ao amin'ny ny zo, anefa. Izany dia napetraka ny fitaovana sy ny mini-tarehimarika litera izay azo fandaharana, Ary nifindra hamorona mijanona-mihetsika sarimihetsika mampiasa ny (maimaim-poana) mpiara-mitory fampiharana ho an'ny Android na iOS.
Haynes Manaova ny V8 Manokana Engine.
4. Haynes Manaova ny V8 Manokana Engine (£ 40)
Firy ny ray aman-dreny ankehitriny mahatsiaro tena ao an-trano, rehefa ahafantarantsika ny any an-taovany ny fiara? Angamba tonga ny fotoana mba hampiofana ny zanatsika. Ity fitaovana avy amin'ny orinasa ambadiky ny fiara malaza boky dia miasa tanteraka V8 solika maotera, izay ny ankizy dia afaka manorina avy rangotra, ratra kely. Mifandrambondrambona kilalaon'afo plugs sy ny feo ao amin'ny tena zavatra dia hita.
Ny mampino Intergalactic Journey Home.
5. Ny mampino Intergalactic Journey Home (£ 20)
Tsy ny Gadget: hatrany ny ankizy mikasika, fa fotsiny pirinty boky. Fa ny teknolojia no ambadiky ny sehatra. voalohany, satria ny manokana ny ankizy anaranao, manaraka eo amin'ny mpitory My Name Namoy ny boky voalohany The Little Boy / Girl izay namoy ny / ny anarany. fa faharoa, satria ny adiresy no ampiasaina mba hahatonga ny farany pejy iray Satellite Map ny tranony. Mijere ny valanoranony ny zanakao Mitete rehefa ho hitan'izy ireo.
• Interview: Very My Name milaza ny $ 9m bola angano
SAM Science Museum mpamoron-javatra Kit.
6. SAM Science Museum mpamoron-javatra Kit (£ 100)
Kiritika elektronika mety ho fanaovana ny fiverenan'ny ao maromaro sekoly, fa nahazo tanana-teo amin'ny fitaovana mbola azo mampahatahotra ho an'ny ankizy. Ny Museum ny mpamoron-javatra Siansa Kit mikendry mba hanamora ny fahazoan, amin'ny boaty ny Sela Mpandray Hafanana sy buzzers izay azo mifandray wirelessly sy nifehy ny mpiara-mitory amin'ny alalan'ny fampiharana. dimy tetikasa, amin'ny fandefasana Morse fehezan-dalàna ny milalao ny amponga milina, dia ahitana.
Osmo dia ny iPad fanampin-javatra mikendry 5-13 taona-ankizy, amin'ny lehilahy iray tena ratsy fa ny takelaka mijoro eo, ary ny fitaratra izay antoky ny ny tampony mba hitodika ny latabatra ho "saha filalaovana". Izany dia midika hoe ny ankizy dia afaka mametraka ny isan'ny namatsy na taratasy taila, Puzzle farantsa vita amin'ny hazo, na ny sary manoloana ny iPad mba hilalao Osmo ny fianarana sy ny famoronana ny lalao. Manana be ny mety ho avy fanitarana.
8. Boom Kids Coloud écouteur (£ 25)
Raha toa ny ankizy vary main'ny rivotra Justin Bieber, One Direction na Fandrian-jaza ny fahalotoana Taylor Swift anao, ireo miloko over-tsofina dia mety ho marina écouteur ny zavatra mba hitandrina ny Krismasy milamina. Ry zareo nefa mahatsapa ho toy ny fahazavana afaka maka battering, ary ny tena endri-javatra mahafinaritra ho an'ny ray aman-dreny dia mety ho ny naorina-in boky fanaraha-maso izay mahatonga anao ho afaka hametra mafy ny zanakao ny fomba milalao ny mozika.
World ny Warriors: A New Hero.
9. World ny Warriors: A New Hero (£ 7)
Tsy tapa-teknolojia, fa ny tantara finday mifototra amin'ny lalao: An-tsainao ny tantara Candy-nanana lohahevitra Tontolo miaramila, izay toy ny orinasa ihany ny Moshi Biby Goavam, dia spawned ny eny amin'ny entam-barotra ara-potoana ho an'ny Krismasy 2015. Noho izany dia afaka ny finday lalao tena mamporisika ny ankizy mba hamaky? Mifototra amin'ny ny zanako roa lahy 'fifaliana amin'ny A New Hero, Eny. Tena ny tantara hanintona ny sasany amin'ireo lalao ny endri-tsoratra fototra, izay mahatsapa toy ny tantara tsara fa tsy ny manify-kofehy ireny ny dokam-barotra eny.
• Interview: Mampaninona Candy miresaka World miaramila
Fanampin-javatra iray hafa takelaka, tamin'ity indray mitoraka ity ho an'ny ankizy madinika - ary miara-miasa amin'ny Android takelaka ary koa ny iPads. Inona no azonao noho ny 25 quid dia napetraka ny taratasy ara-batana - ny dimy vowels - izay eken'ny Tiggly ny fampiharana rehefa napetraka teo amin'ny takelaka touchscreen. Ireo Apps - Tiggly Doctor, Tiggly Tantara Maker, Tiggly sambo mpisitrika sy ny vaovao Street Sesame Alphabet Kitchen Reading - dia afaka, mampiasa ny taratasy mba hanampiana ny ankizy mampihatra phonics, famahana olana sy ny teny fananganana ny fahaiza-manao, ankoatra ny hafa.
Ny fanomezana ny "marani-tsaina" Barbie Doll ny Miss amin'ny antony ny fiainana manokana? Lottie Stargazer Mety ho mahaliana hafa. Ny mpandray anjara dia astronoma sy ny ny teleskaopy sy Mety tsara-mafana fitafiana ho an'ny andro alina-hijery kintana. Inona koa, ny mpanao niara-niasa tamin'ny Eoropeana Space Agency, izay efa nandefa vohikala mpiara-mitory mba mamporisika ny ankizy mba hahalala bebe kokoa momba ny rahona tany ambony.
More taratasy natao ho ampiasaina amin'ny takelaka - iPad ihany amin'ity tranga ity, Fa ankehitriny - amin'ny Marbotic manome abidy iray manontolo ny hevitry ny touchscreen-fantatra hazo taratasy. Nanomboka ainy ho fanangonam-bola Kickstarter tetikasa, ny Smart Taratasin'i dia hanana mpiara-mitory roa fampiharana rehefa mandeha amidy tamin'ny fiandohan'ny volana Desambra - Alphamonster sy Vocabubble - miaraka bebe kokoa amin'ny manaraka 2016. Ny madio ny heviny ankehitriny amin'ny hazo-taratasy Puzzles.
Mikasika Board Starter Kit.
13. Mikasika Board Starter Kit (£ 95)
More micro-elektronika izany fitaovana, izay blends tariby sy ny alligator rakitsary amin'ny nentim-paharazana papercraft - autocollant, cutouts sy ny modely dia ampidirina ao anaty boaty. Ny fototra no tena Touch Board: ny Arduino solosaina miaraka amin'ny 12 electrodes, izay azo mifandray amin'ny fampiasana "herinaratra loko" - conductive loko izay azo voaloko amin'ny fitaovana hafa koa izy hampody azy ho any Sela Mpandray Hafanana. Tetikasa telo ireo soso-kevitra ao amin'ny boaty, amin'ny aingam-panahy bebe kokoa ao amin'ny vohikala ofisialy.
14. Hello Ruby: Adventures in Coding (£ 11)
Mikendry ny ankizilahy sy ny ankizivavy mitovy, Miarahaba Ruby no brainchild ny failandey developer Linda Liukas, izay nanangana $ 380k amin'ny Kickstarter amin'ny 2014 mba crowdfund ny boky fampianarana ny fototry ny fandaharana amin'ny ankizy. Ruby dia ny kintan'ny ny boky, izay antsasaky ny tantara sy ny antsasaky Coding-mifandray asa. Tsy mampianatra ny fiteny manokana, dia mifantoka amin'ny kajy amin'ny solosaina, mieritreritra: fandravana midina asa an-tohatra, spotting lamina sy ny maro hafa.
• Interview: Linda Liukas ny fanentanam-panahy ho an'ny Hello Ruby
Toca Paper Anjely.
15. Toca Paper Anjely (£ 20)
Toca Boca dia iray amin'ireo javatra indrindra, famoronana ny fampiharana ny ankizy mpandraharaha eo amin'izao tontolo izao, sy ny quirky nafana litera rehefa tia ankizy an-tapitrisany tato anatin'ny taona. Toca Paper Anjely dia tsy ny fampiharana, anefa: fa ny "tsehatra napetraka" ny mareva-doko critter faritra vita amin'ny karatra, izay ny ankizy dia afaka miara-slot anefa izay tia ny hanao ny endri-tsoratra.
• Interview: Toca Boca ny drafitra mba hiondrana an-tserasera lahatsary
ekena, 3D mpanonta Mety tsy ho ao an-tampon'ny ny lisitry ny Krismasy manolotra ho an'ny ankamaroan'ny ray aman-dreny - aoka irery ao ny teti-bola - fa ho an'ireo maniry ny hamela ny zanany vahanareo ny teknolojia mialoha ny vahoaka, ny Da Vinci Jr dia mendrika ny try. Tsy Mampanantena tsy ny calibration fanaintainan'ny sarotra kokoa modely, ary manana ny fiaraha-monina amin'ny aterineto ho an'ny ankizy mba hahita mahaliana 3D teti-dratsy mba pirinty.
British startup Kano dia ny iray toko kosa miezaka ny hahazo ny ankizy computing - ary amin'ity tranga ity, izy ireo hanao ny solosaina ny tenany. Ny fitaovana dia mifototra amin'ny farany Raspberry Pi solosaina, augmented amin'ny mamirapiratra boasary fitendry sy ny rindrambaiko hatao ny ankizy manao mozika, fandaharana ary na dia fiddling momba ny amin'ny Minecraft. koa vaovao: iray £ 110 "efijery maika" ny ankizy mba hanangana ny azo entina fampisehoana.
• Review: ahoana izany toy ny fanaovana ny Kano solosaina miaraka amin'ny ankizy
18. EE Robin takelaka (£ 30 + isam-bolana fifanarahana)
An hafa ny Amazon ny Fire HD Kids Edition (na nitranga-on iPads) dia finday mpandraharaha EE ny Robin, izay nanomboka tamin'ny Oktobra. Tena iray Android takelaka izay tonga preloaded amin'ny fampiharana, lalao sy ny e-boky, ary koa ny maimaim-poana ny fidirana ho any amin'ny (tsara) Hopster service, izay amboarany mivantana fahitalavitra mampiseho amin'ny fanabeazana mini-lalao. Ray aman-dreny sy ny fanaraha-maso ny rafitra fanivanana aterineto ihany koa tafiditra.
Ny Lovely Stampy Book.
19. Ny Lovely Stampy Book (£ 8)
Raha manan-janaka tia Minecraft sy YouTube, ianao efa hahalalany izay rehetra momba ny Stampy - antsoina British YouTuber Joseph Garrett. Rehefa nahasarika mihoatra noho 6.6 tapitrisa mpanjifa ny fantsona, tamin'ity taona ity dia nanomboka ny voalohany amin'ny mpamoaka boky Egmont. Tena mifangaro ny tantara an-tsary, Quizzes, zava-misy momba ny Stampy sy ny namany, sy ny asa atao hevitra - miampy ny mofo fomba fahandro - miaraka amin'ny be ny soratra masina ho an'ny tanora mpankafy ny mamantatra. Fotsiny ny vola-in fanao isan-taona.
• Interview: avy Minecraft ny boky, ny zavatra nataon'i Stampy manaraka
Dot sy Dash.
20. Dot sy Dash Coding robot (£ 130)
More Coding ho an'ny ankizy - ny foto-kevitra lehibe ao amin'ny 2015 - Afa-tsy izao fotoana misy roa ny rotund milina mba hanampiana. Dot no amin'ny toerana ny anankiray teo ankavanany izay mijery toy ny Webcam, raha mbola Dash dia ny lehibe kokoa namany, afaka nanakodia manodidina ny efitrano. Samy dia fehezin'ny stringing miara-biriky ny fehezan-dalàna eo amin'ny mpiara-mitory fampiharana, izay mikendry ny hampianatra ny ankizy ny fahaiza-manao fandaharana voalohany.
• Afaka programmable robot Dot sy Dash hampianatra ny ankizy ny kaody?
Na inona na inona ny zanakao no takelaka mampiasa - tsara, raha mbola izany ny 10.1 mirefy iray, na dia ny fito-mirefy dika ihany koa misy - ity raharaha ity dia iray amin'ireo hevitra tsara indrindra ho fiarovana azy. Tsy fotsiny satria Ho hamonjy anao tsy tena mampahatahotra indrindra dia lamba-mitresaka raha fitaovana no nilatsaka teo amin'ny tany. Ny fivarotana teboka eto dia ny ivelan'ny raharaha dia hamafa-madio, amin'ny washable vala omena ho an'ny ankizy mba scribble ny doodles ny raharaha ary mandoko azy ireo amin'ny.
Ny tena antso ny Kano solosaina dia fa mahatonga ny Raspberry Pi azon'ny bebe kokoa amin'ny ankizy. Fa raha izy ireo (na ianao) kokoa matoky, azonao atao ny mandeha mivantana any amin'ny akora ary ny farany Pi hividy solosaina board. Tena enina heny noho ny teo aloha haingana modely, ary afaka manohana ny Windows 10 rafitra fandidiana raha Linux dia tsy ny zavatra. Ianao no mila mividy fitaovana hafa toy ny lamba sy ny fitendry, fa ny fametrahana ny rafitra Pi-monina miaraka amin'ny rangotra, ratra kely dia mety ho tena mahafinaritra mpiara tetikasa.
Fanomezana ho an'ny iray hafa Minecraft-very saina ny ankizy: izany ho an'ireo izay manao ny lalao Mojang amin'ny biraonao, fa tsy ny solosaina na finday hampionona fitaovana. Gameband dia wearable tarika izay, rehefa plugged in alalan'ny USB, lamosiny ny ankizy Minecraft tontolo, mba hahafahany mandray azy ireo amin'ny namana mba hilalao ny tranon'ny. Vitsivitsy tonga tontolo preloaded, ary ny fitaovana miasa ihany koa ho toy ny pixellated fiambenana - tanteraka tamin'i rindrambaiko mba ampanjifaina ny miseho.
Raha ny marina, izay vokatra eo amin'ny zava-mahagaga Teknolojia no hamonjy antsika vohikala ho very maina ny fiheverana ny Noely gifting. Saingy ny DIY Electro Dough Kit izay mety ho toa marina indrindra: fa fitambarana jiro, Switches sy buzzers natao ho squashed ho Play-Doh (na ny koba izay efa nataony tamin'ny zanakao ao an-trano) hamorona maro loko - ary squidgy - elektronika faritra. Ny tranonkala Manome be dia be ny hevitra fa tokony ho, fitaomam-panahy raha tsy ampy.
Eny, fa lafo. Eny, fanorenana izany dia azo inoana fa hitsentsitra ny Noely ny maraina manontolo, fara fahakeliny, - fa manana mihoatra noho ny 1,100 farantsa. Fa ny humanoid Meccano(Ish) milina dia niakatra teo amin'i Lego ny Mindstorms EV3 Bot mamirapiratra ho toy ny any an-Namorona ny Robots ho an'ny tanora mpamorona. Toy ny fitaovana hafa ato amin'ity fantina, misy mpiara-mitory fampiharana ny hifehy ny G15, Na dia ny ankizy dia afaka ihany koa mampianatra izany amin'ny alalan'ny teny sy ny hetsika.
Alina Zookeeper sy ny Fitsikilovana zirafy.
26. Alina Zookeeper sy ny Fitsikilovana zirafy (£ 7)
Traditonal iray hafa pirinty boky, fa indray, izany no spawned iray nomerika izao tontolo izao. Raha izany dia, fa Night Zookeeper, ny fiaraha-monina amin'ny aterineto izay ankizy hanonofy ka hanatsoaka ny ody biby, raha mamaky (ary ny famoronana) tantara sy ny lalao video hiaro ny Zoo. Ary misy boky mba hanitarana eo amin'izao tontolo izao sy ny zavaboary, fitsikilovana tanteraka tamin'i zirafy ary ao ny andro-mpitety elefanta. Izany no iray amin'ireo boky voalohany izay aho, dia nahazo ny (Nisalasala teo aloha-mpamaky) enina taona Famakiana zanany irery taorian'ny-jiro avy - fiderana avo tokoa.
• Interview: Night Zookeeper ankizy dia manolotra fomba vaovao mamorona sy hilalao
Adinoy humanoids: -paosy ity salantsalany milina kokoa mampahatsiahy ny sekoly tranainy-Apple iMac totozy. Ary be dia be ny smarts Packs aza: ankizy "fandaharana" ny fitaovana amin'ny alalan'ny tsipika sy ny manatona vato ny loko amin'ny taratasy, izay nadika didy araka ny OxoBlockly fandaharana fitaovana. Ny mpiara-mitory Ozobot fampiharana ho an'ny Android sy ny iOS hampianatra ny ankizy ny fomba handray soa faran'izay betsaka avy tao an-milina.
Ahoana no hetsika olo-malaza manana teknolojia zoro? Rehefa ry zareo malaza mifototra amin'ny YouTubers, mazava ho azy. British gamer Daniel "The Diamond Minecart" Middleton manana iray amin'ireo fantsom-malaza indrindra eto an-tany amin'ny 2015 noho ny Minecraft niainany. Izy koa dia iray amin'ireo voalohany kintana mba hovana ho "Tube Heroes" hetsika endrika, namita ny amboadia manjombona. Ny hafa ao amin'ny andian-dahatsoratra ahitana CaptainSparklez, Sky sy Tobuscus - mahazatra rehetra Minecraft anarana tanora mpankafy.
• Analysis: Ny Diamond Minecart lasa malaza indrindra YouTuber
Ravensburger Siansa X Electronics sy Circuitry
29. Ravensburger Siansa X Electronics sy Circuitry (£ 30)
More micro-elektronika, ao amin'ny nieritreritra tsara avy tavoara feno fitaka izay mikendry ny hahazoana ny ankizy tanana-on amin'ny transistors, resistors, capacitors sy ny tariby. Ny fifantohana dia eo amin'ny ankizy fananganana ny tetikasa, avy amin'ny jiro sy ny fanairana ny fanamafisam-peo noho ny mozika. Misy tetikasa valo rehetra, fa be dia be ny fitaomam-panahy ho an'ny hafa fanandramana rehefa Efa vita.
I hijery taratra eo Amin'ny Little Eye: Zavatra Spy ahy.
30. I hijery taratra eo Amin'ny Little Eye: Zavatra Spy Ahy (£ 0.01)
Ny iray ho an'ny ankizy kely be taona. Mety ho toy ny mora vidy sy somary churlish ny hanome ny zanakao izay saotra ho anareo izay nampisy fiantraikany denaria ary mety hitarika marary saina. Fa tsy maintsy mianatra indraindray (momba ny antony marary saina, tsy momba ny cheapness sy ny churlishness - na izany koa). Ity boky ity avy amin'ny orinasa teknolojia Afeno ny Ass "tsipiriany 27 Internet-tokantrano mifandray vokatra sy ny fitaovana izay mety ho nijirika any, na nampiasaina mba hitsikilo ny olona tsy ny fahalalany ". Noely sambatra…
Izany no 30 ideas for your Christmas gifting, fa izay manana no Nalahelo? Ny fanehoan-kevitra fizarana dia misokatra ho an'ny soso-kevitra ny teknolojia mifandray amin'ny fanomezana ho an'ny ankizy.
55552	0 3D pirinty, Amazon.com, Article, Books, Ankizy Tech, Krismasy, Computing, Toetoetra, Gadgets, Minecraft, Programming, Robots, Science, fiantsenana fitsangatsanganana, Star Wars, Stuart Dredge, Tablet ordinatera, Teknolojia, YouTube
← Beeline bisikileta Fikarohana fitaovana famerenana: adin-tsaina-maimaim-poana ho an'ny mpikaroka tany vaovao mahafinaritra Ny fifohana sigara hery avo-kozatra rongony mety hanimba ny tsiratsiraky atidoha →